Ụgbọ ala ikuku ihe nchacha - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
Ajụjụ FAUCI Car Air Disinfector Ajụjụ
Azịza: buru ụzọ dọwaa ihe nkiri aluminom nke ngwugwu ahụ, wee wụsa ihe niile dị na granular n'ime ite cylindrical nwere obere dayameta. Mgbe ahụ, tinye mkpuchi ite cylindrical nke nwere dayameta buru ibu n'ahụ ahụ ite ahụ, pịa ya nke ọma ruo mgbe enwere ụda “pịa”, wee lelee ma etinyere ngwaahịa ahụ niile nke ọma, wee tinye ya ebe achọrọ maka ojiji;
Is A na -etinye ya n'ime ụgbọ ala ka ọ na -ehicha ma na -ehicha ikuku n'ime ụgbọ ala ozugbo, na -egbu nje na ebu na ụgbọ ala, na -emebi ma wepụ isi nke ga -emerịrị na VOC;
Enwere ike idowe ya na tebụl, tebụl ogbako, tebụl ime ụlọ, tebụl ụmụ akwụkwọ, ma ọ bụ buru ya ka ọ gbasa ikuku dị nso ozugbo;
Enwere ike itinye ya na igbe egwuregwu ụmụaka, igbe ọkọnọ, igbe nchekwa na ime ụlọ nchekwa iji mee sterilization na ọgwụ mgbochi nke ihe ndị dị n'ime.
Azịza: Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ngwaahịa ndị yiri ya n'ahịa na-eji sodium hypochlorite dị ọnụ ala (ya bụ, akụrụngwa nke Disinfectant 84), nke na-ewepụta acid hypochlorous site na mmeghachi mmiri, wee mepụta chlorine dioxide na obere ego. nke gas chlorine na-egbu egbu (Mkpokọta chlorine kwesịrị naanị iru 0,001 mg/L ka ọ nwee ike bute nsị na-adịghị ala ala, yabụ enweghị ike iji hypochlorous acid maka nsị ikuku), ma ọ bụ jiri otu ihe ahụ dị ọnụ ala dị ọnụ ala klorine dioxide banye. mmiri iji hapụ chlorine dioxide. Mgbe ikuku iru mmiri dị oke elu, enwere ike ịtọpụ ngwa ngwa, na mbelata ga -ada n'ime obere oge.
Ihe arụpụtara n'ime FAUCI AAPG ihe dị na ikuku ikuku ụgbọ ala FAUCI na-eji teknụzụ ikuku oxygen na-arụ ọrụ nke ọma na teknụzụ nje na-ewepụta ngwa ngwa na-ewepụta onwe ya nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara, nke nwere ike jiri nwayọ na nwayọ hapụ mpekere ikuku chlorine dioxide dị ọcha na arụ ọrụ nke ọma. ogologo oge.
Ihe na -emebi ihe nke ikuku ikuku ụgbọ ala FAUCI bụ chlorine dioxide dị ọcha na oxygen na -arụ ọrụ ROS, nke nwere arụmọrụ disinfection dị elu yana nchekwa; ebe ngwaahịa ndị ọzọ enweghị ROS oxygen na -arụ ọrụ, enwere ike ịnwe hypochlorous acid, chlorine na ihe ndị ọzọ na -egbu egbu nke mmachi mmadụ machibidoro iwu, nke na -abụghị naanị nwere arụmọrụ dị ala, kamakwa o nwere ihe egwu nchekwa;
FAUCI ikuku ikuku ụgbọ ala nwere mmetụta na-aga n'ihu ruo ọnwa 3, ebe ngwaahịa ndị ọzọ kacha karịa ọnwa 1-2.
Ọ dị mma iji ngwaahịa a maka mmadụ na anụmanụ ??
N'otu oge ahụ, ihe mgbochi ikuku ụgbọ ala FAUCI (ihe FAUCI AAPG wuru n'ime) agabigala ule CMA/CNAS dị mkpa: nnukwu nnwale nnwale nsị na-egosi na ọ naghị egbu egbu; mmechi ule micronucleus sel bụ ihe ọjọọ niile, nke pụtara na enweghị mmụba anụ ahụ selụ na enweghị nsí mkpụrụ ndụ ihe nketa;
Ọ ka ga -adị m mkpa iyi nkpuchi ma ọ bụrụ na m tinye ụgbọ ala ikuku nhicha ụgbọ ala n'akụkụ m?